आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज १२ गते। शुक्रबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Sep 27, 2018
इश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर २८ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– तृतीया, ८:११ बजेउप्रान्त चतुर्थी। नक्षत्र– भरणी, २६:५८ बजेउप्रान्त कृत्तिका। योग– हर्षण, २५:२१ बजेउप्रान्त वज्र। करण– भद्रा, ८:११ बजेदेखि वव, १९:५० बजेउप्रान्त वालव। आनन्दादिमा मुद्गर योग। चन्द्रराशि– मेष। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:५५ बजे, सूर्यास्त– १७:५२ बजे र दिनमान २९ घडी ५२ पला। चतुर्थी श्राद्ध। गातिला। इन्द्रध्वज पातन। नानिचाया।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। कुराहरू नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो भाइको मद्दत गर्नुहोस्। संघर्षलाई अनावश्यक तरीकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आज प्रेम गर्ने मौका गुमाउनु भएन भने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै तपाईंले यो दिन बिर्सन सक्नु हुनेछैन। तपाईंले जे गर्नुहुन्छ – तपाईंको स्थिति कमान गर्ने हुनेछ। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। विश्व आज नाश हुन सक्छ, तर तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको अँगालो बाहिर आउन सक्नु हुनेछैन।
मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। आकाश चम्किलो देखिन्छ, फूलहरू अझै रंगीन जस्तो लाग्छ, र सबै नै तपाईं वरिपरि प्रकाशित हुनेछ; किनभने तपाईंलाई प्रेम भएको छ! तपाईंको लगातार मेहनतलाई आज साँच्चै नै राम्रो लाभ भएको छ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
कुनै महात्माबाट ईश्वरीय ज्ञानले सान्त्वना र सजिलोपना प्रदान गर्दछ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। मित्र र जोडी/पत्नीले तपाईंलाई सान्त्वना र आनन्द दिनेछन अन्यथा आज एउटा नीरस र व्यस्त दिन हुनेछ। आज समय, काम, पैसा, साथीभाइ, परिवार, आफन्त; सबै एक पक्षमा र आफ्नो साथीसँग तपाईं अन्य पक्षमा, सबै एक-अर्कामा हुनेछन्। तपाईंले धेरै समय लाभ हुने परियोजनाहरुमा काम गर्नुपर्छ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। विवाह पछिको प्रेम गाह्रो झैं लाग्छ, तर यो दिनैभरि तपाईंलाई भइरहेको छ।
साँझ एक समय आराम गर्नुहोस्। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेदमा विजयी भएर – तपाईं सजिलै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु हुनेछ। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि परीक्षा दिनेहरूले आफुलाई शान्त राख्नु आवश्यक छ। परीक्षाको डरले तपाईं सताओस। तपाईंको प्रयासले निश्चित सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवन आफ्नो परिवारबाट धेरै नै प्रभावित हुन सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले बौद्धिमानी भएर कुराहरूको संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुनेछ।
यदि सम्भव छ भने लामो यात्रा गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस् किनभने तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर हुनुहुन्छ र यसले तपाईंलाई अझै कमजोर पनि बनाउँछ। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। कार्यालयको काममा धेरै संलग्न भएकोले आफ्नो जोडी/पत्नीसँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंको प्रिय रोमान्टिक मुडमा हुनेछन्। केही समयको लागि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ – सहकर्मी / साथीहरू तपाईंको सहायता गर्न आउन सक्छन् – तर धेरै सहयोग प्रदान गर्न सक्षम हुने छैनन्। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
बच्चाहरुसँग खेल्नाले तपाईंलाई धेरै शान्तिको अनुभव हुनेछ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। तपाईंलाई मात्र नभएर तपाईंको परिवारलाई पनि वशीभूत गराउने केही राम्रो समाचार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। तपाईंले आफ्नो उत्तेजना नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक छ। निष्पक्ष र उदार प्रेमको लागि पुरस्कृत हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंको इमानदारी र काम पूरा गर्ने क्षमताको कारण तपाईंको पहिचान बन्नेछ। तपाईंको सञ्चार कौशल प्रभावशाली हुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईंको मनमा शान्ति हुनेछैन। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तलबमा बढोत्तरी हुनाले तपाईंको जाँगर बढ्न सक्छ। अब आफ्ना सबै निराशा र उजुरी हटाउनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तपाईंका जोडीको वफादार हृदय र साहसी जाँगरले आनन्द दिन सक्छ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। कल्पनामा पछि नपर्नुहोस् र धेरै व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस् – आफ्ना साथीहरूसँग केही समय बाँट्नुहोस् – यसले तपाईंलाई धेरै राम्रो गर्नेछ। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
तपाईंले आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पर्नेछ – जसले तपाईंलाई परेशान र अत्यधिक त्रसित बनाउनेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्न छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने उचित समय। लामो समयसम्म एक्लो काटेको समयको अन्त भयो – तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी पाउने समय आएको छ। तपाईंको मालिकले आज तपाईंका कामको प्रशंसा गर्न सक्छ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् – तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा – तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक-अर्कामा पग्लेका छन्।
मानसिक शान्तिको लागि आफ्नो तनाउ बाहिर निकाल्नुहोस्। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। तपाईंले जे गर्नुहुन्छ – तपाईंको स्थिति कमान गर्ने हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नो किशोर अवस्थाको सम्झना गर्नुहुनेछ, र फेरि सबै निर्दोष मजाको आनन्द लिनुहुनेछ।
झगडालु व्यक्तिसँग तर्क गर्नाले तपाईंको मुड बिगार्न सक्छ। यदि सम्भव छ भने बुद्धिमानी भएर यसबाट जोगिनुहोस्, शत्रुता र कचिंगलले तपाईंलाई कहिल्यै मद्दत गर्नेछैन। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन। आनन्दको लागि नयाँ सम्बन्ध बनाउन तत्पर हुनुहोस्। कसैको व्यावसायिक प्रगति हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। तपाइँको पुरानो मित्र तपाईंका आफ्नो जीवन साथीसँग पुरानो सुन्दर सम्झनाहरु लिएर आउन सक्छ।